(शकिरा बाट पठाईएको)
स्थानीय निर्माताहरू सँग गरेको आफ्नो पहिलो दुई एल्बमहरूमा विज्ञापनिक असफलता पछि र जुन कोलम्बिया बाहिर केही परिचित भए पश्चात, शकिराले आफ्नो ब्राण्डको संगीतको निर्माण गर्नको निर्णय गरिन। १९९५मा उनले पीएस देस्काल्जोस लोकार्पण गरिन, जसले उनलाई ल्याटिन अमेरिका र स्पेनमा खूब प्रसिद्धि दिलायो। उनको १९९८को एल्बम ¿दोंदे एस्तन लोस लाद्रोनेस?ले विश्वभरीमा ७० लाख भन्दाबढि प्रति बिक्रि गरेर एक महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल गर्‍यो। सन् २००१मा लण्ड्री सर्भिस एल्बमको लोकार्पण गरेर उनी अङ्ग्रेजी-बोल्ने संसारमा प्रवेश गरिन। यस एल्बमले १ करोड ३ लाख भन्दा बढि प्रतिहरू बिक्रि गर्‍यो। यसको एकल संगीत भिडियो "ह्वेनेवर, ह्वेयरेवर"ले २००२को सर्वाधिक चर्चित गित बन्यो।  चार वर्ष पछि शकीराले दुई एल्बम परियोजनाहरू फिजासिओं ओरल भोल. १ र ओरल फिक्सेशन भोल. २ लोकार्पण गरिन। दुवै एल्बमले, विशेष रूपमा २०००को सबैभन्दा सफल गीत "हिप्स डन्ट लाई"का साथ उनको सफलतालाई बल दिए।
शकिरा तेर्ह वर्षकि मात्र हुँदा सोनी म्यूजिक कोलम्बियाको सहयोगमा उनको पहिलो एल्बम, म्याजिया १९९०मा रेकर्ड गरियो। यसमा उनले आठ वर्षको उमेरमा लेखेका गितहरूको सङ्ग्रह समावेश छन। यि गितहरू पप रक गीत र इलेक्ट्रनिक संगित वाला डिस्कोको मिश्रण थियो तर यो रेकर्डिङग र प्रोडक्शनमा सामन्जस्यको कमीको कारण यसको एकदम नोक्सानी भयो। "म्याजिया" र तीन अन्य एकलहरू गितहरू समावेश यो एल्बम १९९१मा लोकार्पण गरियो। हुनत कोलम्बिया रेडियोमा यसको प्रदर्शन एकदम राम्रो थियो र यसले युवा शकिरालाई धेरै चर्चित बनायो, तर विश्वभरीमा केवल १,२००प्रति मात्र बिक्रि गर्न सफल भएकोले यो एल्बम व्यावसायिक रूपमा राम्रो साबित भएन। म्याजियाको खराब प्रदर्शन पछि शकिराको लेबलले उनलाई स्टूडियोमा फिर्ता गएर दोस्रो फलि-अप रेकर्ड लोकार्पण गर्न आग्रह गरे। शकिरा आफ्नो देश कोलम्बिया बाहिर कम चर्चित भएता पनि उनलाई फेब्रुअरी १९९३मा चिलीको विना डेल मार इन्टरनेशनल सङ्ग फेस्टिवलमा प्रश्तुति गर्नको लागि आमन्त्रित गरियो। यस फेस्टिवलमा इच्छुक ल्याटिन अमेरिकी गायकहरूलाई आफ्नो गितहरू प्रस्तुत गर्ने मौका दिइएको थियो र पछि निर्णयकर्ताको एक समूहद्वारा यसको विजेता चुनियो। शकिराले गाथागीत (ब्यालड) "एरेस" प्रस्तुत गरेर तेस्रो स्थानको ट्रफी जितिन। उनको पक्षमा मत दिने न्यायाधीशहरू मध्य एक त्यसबेलाका २० वर्षिय रिकी मार्टिन थिए।
शकिराको दोस्रो स्टूडियो एल्बम पेलिग्रो त्यहि शैलीमा नै १९९३मा लोकार्पण गरियो, तर उनी यसको अन्तिम परिणाम, मुख्य रूपले प्रोडक्शनको मामलामा सन्तुष्ट भईनन्। शकिराले यस एल्बमको प्रचारमा अस्वीकार गरेपछि यो पनि व्यावसायिक रूपमा असफल मानिएता पनि यस एल्बमलाई म्याजिया भन्दा राम्रो तरिकाले लिईयो। यसपछि शकिराले हाई स्कूल स्नातक गर्नको लागि रेकर्डिङगबाट केही समयको छुट्टि लिने फैसला गरिन। त्यसै वर्ष शकिराले कोलम्बियन टिभी शृङ्खला "द ओएसिस"मा अभिनय गरिन जुन केही हद सम्म १९८५को अरमेरो बियोगमा आधारित थियो।
शकिराले १९९५मा एल्बम सङ्कलन "नुएस्त्रो रक"को लागि मूल: ¿दोन्दे एस्तस कोराजोन? गीतको रेकर्ड गरेकि थिईन (पछि उनको एल्बम पीएस देस्काल्जोसमा जारी भयो), जुन विशेष रूपले कोलम्बियामा लोकार्पण गरियो। उत्कृष्ट एकल गितहरू "एस्टोइ एक्वी", "पीएस देस्काल्जोस, सुएनोस ब्लान्कोस", ¿दोन्दे एस्तस कोराजोन? जस्ता गितहरूले गर्दा पीएस देस्काल्जोस एल्बमले उनलाई ल्याटिन अमेरिकामा अत्याधिक चर्चित बनायो। शकिराले पोर्चुगिज शीर्षकमा "एस्टोउ एक्वी", "अम पाउको दे आमोर" र "पेस देस्काल्कोस" जस्ता तीनवटा ट्र्याकहरू पनि रेकर्ड गरिन।
शकिरा १९९५मा विभिन्न देशहरूको संगीतको प्रभावको र ऐलानिस मोरिसेट-उन्मुख व्यक्तित्व उपयोग गर्दै लुई एफ. ओचोया सँग सोनी म्यूजिक अन्तर्गत रेकर्डिङ्गमा फिर्ता भईन। यसले उनको अर्को केही एल्बमहरूलाई सम्म प्रभावित गर्‍यो। यस रेकर्डिङले उनको तेस्रो स्टूडियो एल्बम तथा पहिलो आधिकारिक एल्बम पीएस देस्काल्जोस(अङ्ग्रेजी: Bare feet) जन्म दियो। उनको एकल ¿दोन्दे एस्तस कोराजोन?को सफलता पछि एल्बमको रेकर्डिङ्ग फेब्रुअरी १९९५मा शुरू भयो। सोनीले १००,००० भन्दा बढि बिक्रि हुने अनुमान गरी एल्बम तैयार गर्नको लागि शकिरालाई १००,००० डलर दियो। यस एल्बमको शुरूवात सँगै शकीराले आफ्नो गायनमा सुधार गरेर तथा सबैभन्दा मुख्य आफ्नो संगीतमा रचनात्मक नियन्त्रणको अभ्यास गरेर आफ्नो संगीत तैयार गर्न शुरू गरिन। अमेरिकाको वैकल्पिक बजार र ब्रिटिश समूहहरू जस्तै द प्रिटेंडर्सबाट प्रभावित यो एल्बम ६ अक्टूबर १९९५मा बोगोटामा ला केस्टेलियन थियेटरको साना हलमा देखाइयो। एल्बमको धुन मधुर, संगीत विस्मित गर्ने र टटका तथा गीत बौद्धिक र एक इलेक्ट्रनिक/ध्वनिक मिश्रण छ जसमा प्रभावी ढङ्गले ल्याटिन पपको ढर्रेको एक प्रामाणिक ध्वनि देखि तोडाइएको छ, जुन पहिले हैन सुना गएको थियो।
पीएस देस्काल्जोस एल्बम अक्टुबर १९९५मा दक्षिण अमेरिकामा र १३ फेब्रुअरी १९९६मा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लोकार्पण भयो। यसले विभिन्न आठ देशहरूमा #१मा शुरुवात गरे पनि अमेरिकि बिलबोर्ड २००मा एल्बम १८० नं.मा पुगयो र अमेरीकि बिलबोर्ड टप ल्याटिन एल्बम्समा ५औं स्थान सम्म पुग्यो। एल्बममा अमेरिकि ल्याटिन चार्टमा दोस्रो स्थानमा पुगेको इस्टोइ एक्वी, अमेरिकि ल्याटिन चार्टमा पाँचौ स्थानमा पुगेको ¿दोंदे एस्तस कोराजोन?, अमेरिकि ल्याटिन चार्टमा छैटौँ स्थानमा पुगेको अन पोको डे अमोर, अमेरिकि ल्याटिन चार्टमा एघारौँ स्थानमा पुगेको पीएस देस्काल्जोस, सुएनोस ब्लान्कोस, अमेरिकि ल्याटिन चार्टमा पन्ध्रौ स्थानमा पुगेको एन्टोलोजिया र अमेरिकि ल्याटिन चार्टमा आठौ स्थानमा पुगेको से क्वैरी, देखि माटालगायतका गितहरू समावेश छन।. अगस्ट १९९६मा RIAAले एल्बमलाई प्लाटिनम स्तरको एल्बमको रूपमा प्रमाणित गर्‍यो।
¿दोन्दे एस्तन लोस लाद्रोनेस?ले विश्वभरीमा ७० लाख भन्दा बढी प्रतिहरू बिक्रि गर्‍यो। शकिराले १९९९मा बेस्ट ल्याटिन रक/अल्टरनेटिभ एल्बमको लागि पहिलो पटक ग्रेमी अवार्डमा मनोनित भईन। शकिराको पहिलो लाई भ एल्बम एमटिभी अनप्लग्ड न्यु योर्क सहरमा १२ अगस्ट १९९९मा रेकर्ड गरियो। यसलाई अमेरिकी आलोचकहरूद्वारा अत्यधिक प्रसंसित यस एल्बमलाई अहिलेसम्मको सर्वोत्कृष्ट लाई भ प्रश्तुतिको दर्जा दिईयो। यसको श्रव्य एल्बमले २००१मा सर्वोत्कृष्ट ल्याटिन पप एल्बमको लागि ग्रेमी अवार्ड प्राप्त गर्‍यो र विश्व भरीमा ५० लाख सीडी बिक्री भयो। मार्च २०००मा शकिराले ल्याटिन अमेरिका र संयुक्त राज्य अमेरिकाको आफ्नो टूर अन्फिबियो नामको दुई महिनाको यात्रा शुरू गरिन। अगस्ट २०००मा उनले ओजोस असीको लागि हाल-निष्क्रिय श्रेणीको पिपुल च्वाइस अवार्ड - मनपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कलाकारमा एमटिभी भिडियो म्यूजिक अवार्ड जितिन। ९ सेप्टेम्बर २०००मा शकिराले ल्याटिन ग्रेमी अवार्ड समारोहमा ओजोस असीको प्रश्तुति गर्‍यो, जहाँ उनी पाँच श्रेणिहरू: एमटिभी अनप्लग्डको लागि वर्षको एल्बम (एल्बम अफ द एयर) र सर्वोत्कृष्ट पप गायन एल्बम (बेस्ट पप भोकल एल्बम), ओक्टावो डियाको लागि सर्वोत्कृष्ट स्त्री रक गायन (बेस्ट फिमेल पप भोकल पर्फर्मेन्स) र "ओजोस असी"को लागि सर्वोत्कृष्ट लघु-संगीत भिडियो (बेस्ट शर्ट फर्म म्यूजिक भिडियो)को लागि मनोनित भईन, तर उनले यिमध्ये दुईमा मात्र जीत हासिल गरिन। शकिराको ओजोस असीको प्रश्तुतिको लागि अहिले सम्मको सबैभन्दा ठूलो ल्यटिन ग्रेमी प्रश्तुति (ग्रेटेस्ट ल्यटिन ग्रेमी पर्फर्मेन्स अफ अल टाइम)को रूपमा मत प्राप्त गरिन।
एल्बम अङ्ग्रेजी भाषाको बजारको लागि मात्र बनाइएकोले रक र स्पेनिश नृत्य प्रभावित एल्बमले रोलिङ्स्टोनको " उनी एकदम मुर्ख लाग्छिन" वा " अङ्ग्रेजी अनुवादमा शकिराको जादु हरायो" भन्ने टिप्पणीका साथ गीत लेख्नमा उनको अङ्ग्रेजी कमजोर रहेको आलोचनाका साथै हल्का महत्त्वपूर्ण सफलता प्राप्त गर्‍यो। शकिरा समकालीन अमेरिकी पप संगीतको पक्षमा लोक र रक मुलहरूलाई छोडेकोले उनको ल्याटिन प्रशंसकहरूद्वारा पनि आलोचित हुनुपर्‍यो। यस तथ्यको बावजूद एल्बम विश्वमा २ करोड भन्दा बढि प्रतिहरू बिक्रि गर्दै २००२को सर्वाधिक बिक्री हुने एल्बम बन्यो। र यस समयमा उनको करियरको सबैभन्दा सफल एल्बम बन्यो। त्यहि समयको आसपास शकिराले अङ्ग्रेजी बजारहरूमा आफ्नो प्रचारको उद्देश्यले पेप्सीको लागि पनि चार गीतहरू: "आस्क फर मोर", "पीड मास", "नक अन माई डोर" र "पाइड एल सोल" बनाईन, जुन एक्सटेन्डेड, पेप्सी सिडीमा समावेश छन।
नोभेम्बर २००२ देखि मे २००३ सम्म ६१ वटा शोहरूका साथ टूर अफ द मन्गूज नामक यात्रा शुरु गरिन। यो यात्रा विश्वभरीको लागि उनको पहिलो यात्रा थियो, जसमा उनले उत्तर र दक्षिण अमेरिकाका साथै युरोप र एसियामा समेत प्रश्तुति गरिन। अप्रिल २००२मा एरोस्मिथको एमटिभी आइकोनमा शकीराले "डूड (लुक्स लाई क अ लेडी)"को प्रश्तुति गरिन। साथै २००२मा शकीरा भिएचवान डिभास लाई भ लस भेगासको लागि चेर, व्हाइट्नी हस्टन, सेलिन डियोन, मेरी जे ब्लिज, अनास्तासिया र डिक्सी चिक्सका साथ समावेश भईन। सेप्टेम्बर २००२मा शकिराले हाल-मृत इन्टरनेशनल भ्यूअर्स च्वाइस अवार्डमा "ह्वेनेवर ह्वेयरेवर"को लागि एमटिभी भिडियो म्यूजिक अवार्ड जितिन। शकिराले यसै भिडियोको स्पेनिश संस्करणको लागि सर्वोत्कृष्ट लघु संगीत भिडियो (बेस्ट शर्ट फर्म म्यूजिक भिडियो) श्रेणीमा ल्याटिन ग्रेमी अवार्ड पनि जितिन। त्यसै वर्ष अक्टोबरमा उनले "सर्वोत्कृष्ट महिला कलाकार", "सर्वोत्कृष्ट पप कलाकार", "सर्वोत्कृष्ट कलाकार-उत्तर(क्षेत्र)", "वर्षको भिडियो"( "सुएरते"को लागि) र "वर्षको कलाकार"को लागि पाँच एमटिभी भिडियो म्यूजिक अवार्ड्स ल्याटिन अमेरिका जितिन। नोभेम्बर २००२मा शकिराको लेबल सोनी बिएमजी (Sony BMG)ले उनको सबैभन्दा ठूलो हिट स्पेनी सङ्कलन ग्रन्देस एक्सितोस लोकार्पण गर्‍यो। सन २००४मा एक डिभिडि र दस-ट्र्याकहरूको लाईभ एन्ड अफ द रेकर्ड नामक एक लाई भ एल्बम पनि लोकार्पण गरियो, जसले विश्वभरीमा ३० लाख सिडिको बिक्री कीर्तिमान स्थापित गर्‍यो र टूर अफ द मन्गूजलाई एक यादगार यात्रा बनायो।
शकिराको तेस्रो एल्बमको प्रचार २००३मा समाप्त भएपछि उनले नयाँ संगित रेकर्ड गर्नको लागि स्पटलाईटबाट बाहिरिने विचार गरिन। उनको चौँथो एल्बमको लागि अनेकौ संभावित दिनहरूको घोषणा भएपनि उनले २००५को शुरूमा एल्बमको शीर्षक "ओरल फिक्सेशन" र यसको कार्यकारी निर्माता रिक रुबिन हुने घोषणा गरिन। शकिराको चौँथो एल्बम फिजासियन ओरल भोल. १ जून २००५मा लोकार्पण गरियो। एल्बमको प्रमूख एकलको रूपमा अप्रिलमा रिलिज भएको ला तोर्तुरा हट १००मा ४० औँ स्थानमा पुग्नाका साथै विभिन्न रेडियोमा ठूलो सफलता हासिल गर्‍यो। यस गितमा स्पेनिश गीतकार एलेक्जेन्ड्रो स्यान्जलाई लिइएको थियो। यसले युएस हट ल्याटिन चार्टमा एक नम्बरमा पच्चीस हप्ता सम्म रहेर रेकर्ड राख्यो। २००५मा शकिरा एमटिभी भिडियो म्यूजिक रेकर्ड्समा स्पेनिश भाषामा गित गाउँने पहिलो कलाकार बनिन।
२००८को शुरुवातमा फोर्बसले शकिरालाई संगीतको क्षेत्रमा सर्वाधिक कमाई गर्ने चौथो महिलाको स्थानमा राख्यो। २ जुलाई २००८मा शकिराले विशाल अन्तर्राष्ट्रिय यात्रासँग सम्बद्ध लाईभ नेशन सँग १० वर्षको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिन। यात्रा समुह एक रेकर्ड लेबल हो जसले संगितलाई बढावा दिनुका साथै आफ्ना कलाकारहरूको संगीत लोकार्पणमा पनि नियन्त्रण गर्दछ। शकिराको अनुबन्धनलाई उद्ध्रित गर्दै लाई भ नेशनक ग्लोबल म्यूजिक प्रमुख जेसन गार्नरले भने "शकिरा वास्तवमा वैश्विक स्तरको कलाकारहरू मध्य एक हुन। उनी विश्वको हरेक कुनामा आफ्नो संगित र टिकट बिक्रि गर्न सक्छिन।" शकिराका प्रतिनिधि तथा लाई भ नेशनले सम्झौताको मुल्य पुष्टि नगरेता पनि यस बातचीतको निकटस्थ मानिसहरूका अनुसार शकिरामा आधारित १० वर्षको प्रदर्शनहरूको अनुरूप $ ७०,०००,०००देखि $ १००,०००,०००को बीचको मुल्याङ्कन गरिएको अनुमान छ। शकिरा एक अङ्ग्रेजी, एक स्पेनिश र एक सङ्कलन गरी तीन एल्बमहरूको लागि एपिक रेकर्ड्ससँग अनुबन्धन भएकी छन तर लाई भ नेशनसँग भएका सम्झौताको यात्रा र अन्य अधिकार तत्काल लागू हुने छन।
शकिराको छैठौ स्टूडियो एल्बमको शीर्ष एकल "शी वूल्फ" १३ जुलाई २००९मा प्रीमियर भयो। शकिराले यो गित जोन हिल र द ब्रेभरीका शीर्ष गायक तथा लेखक स्याम एन्डिकटसँग मिलेर लेखन तथा उत्पादन गरेकी थिईन। यसको स्पेनी संस्करण, लोबा पनि त्यसै दिन प्रीमियर भयो। केही दिन पछि "शी वूल्फ" र "लोबा" डिजिटल डाउनलोडमा पनि उपलब्ध भयो। "शी वूल्फ"को भिडियो ३० जुलाई २००९को एमटिभीमा प्रीमियर भयो। यो एकल ल्याटिन अमेरिकामा एक नम्बर, जर्मनीमा, आयरल्यान्ड, इटली, एस्टोनिया र स्पेनमा दुइ नम्बर, स्विट्जरल्याण्ड र अस्ट्रियामा तीन नम्बर, संयूक्त अधिराज्य, फ्रान्स र ग्रीसमा चार नम्बर, क्यानाडा र बेल्जियममा पाँच नम्बर, फिनल्यान्डमा छ नम्बर, जापानमा नौ नम्बर र अमेरिकामा एघार नम्बरमा रहि विश्व भरीमा सफल भए थियो।
जुन २००१०मा बिलबोर्ड पत्रिकासँगको अन्तरवार्ताको क्रममा शकिराले आफ्नो नयाँ एल्बम सेप्टेम्बरमा लोकर्पण हुने घोषणा गरिन । १९ अक्टूबर २००१०मा शाले एल शोल शकिराको सातौँ स्टुडियो एल्बमको रूपमा लोकार्पण भयो। एल्बमको शीर्ष एकल गित लोका विश्वका धेरै देशहरूमा शिर्षस्थानमा रह्यो । उनले अगस्टमा बार्सिलोनामा "लोका"को भिडियो खिचाईन । र सेप्टेम्बर १मा एल्बमको आधिकारिक आबरण अनाबरण गरिन।
२००७ को आरम्भमा शकिराले अमेरिकन आर एन्ड बि गायिका बेयोन्से सँग "ब्यूटीफुल लायर" गितमा काम गरिन, जुन बेयोन्सेको बी'डेको डिलक्स संस्करणमा दोस्रो एकलको रूपमा लोकार्पण भयो। ७ अप्रिल २००७ मा, बिलबोर्ड हट १००को चार्टमा यो गीत ९४औं स्थानबाट ३ स्थान पार गर्दै ९१ औँ स्थानमा पुग्यो जुन यस चार्टको इतिहासमा सबैभन्दा अधिक माथिल्लो स्थानमा चढ्ने गीतको एउटा नयाँ कीर्तिमान थियो। यो ब्रिटेन सिंगल्स चार्टमा पनि नं.१मा रह्यो। यो गीतले गायन साथै सर्वोत्कृष्ट पप सहयोग (बेस्ट पप कोलाबोरेशन विद भोकल्स)को लागि एक ग्रेमी अवार्डमा मनोनयन आर्जन गर्‍यो । यो गीत बेयोन्सेको विश्वमा सबैभन्दा सफल गीतहरूमा मध्य एक थियो। यो गीत विशेष रूपले अर्जेन्टिना र स्पेन जस्तै स्पेनिश भाषी देशहरूमा पहिलो स्थानमा रहदै सर्वाधिक लोकप्रिय भयो ।
विकिमिडिया कमन्समा सकिरा सम्बन्धी अन्य सामग्रीहरू रहेका छन्।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=सकिरा&oldid=965681" बाट अनुप्रेषित
अन्तिम सम्पादन १४ डिसेम्बर २०२०, २२:१५
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक २२:१५, १४ डिसेम्बर २०२० मा परिवर्तन गरिएको थियो।